Home Wararka Maxaa ku Dhacay ex-Xildhibaan Dhalxa Maxaasa Sugaya kuwa la mid ka ahaa?
Maxaa ku Dhacay ex-Xildhibaan Dhalxa Maxaasa Sugaya kuwa la mid ka ahaa?
Sida dhabta ah Ex-xildhibaan Dhalxa waxuu ka mid ahaa dadka ku sirmay waddaniyadda bugta ah ee Farmajo, waxuuna u arkayey inuu yahay nin wax lagu darsan karo oo u dhaama dadka kale ee ay oodwadaagta, dhaqanwadaagta iyo dhiil wadaagta yihiin.
Ex-Xildhibaan Dhalxa waxaa uu ahaa xildhibaanada mar waliba la duuban tallaabo kasta oo ay qaadaanna ay la saxan tahay Farmajo iyo Xasan kheyre intii ay wada joogeen. Meelaha qaar waxaa jira eex iyo eedo laga tirsanayo Ex-xildhibaan Dhalxa inuusan si caddaalad ah codkiisa iyo garashadiisa u isticmaalin si uu qaranka ugu hiilliyo ee Farmajo ayuu Qarankii dhammaa ka doortay, waxaanau mar waliba u codkiisa u badnaa dhinaca Farmajo jira.
Haddaba maxaa ku dhacay ex-Xil. Dhalxa oo uu u waayey hiilka kii uu u hiilliyey?
Farmajo, Fahad iyo Xasan Kheyre abaal maleh, fiiri wixii ay ku dhigeen Thabit, Sanbaloolshe, Sadiq Joon, Cabdullahi Sheekh Xasan, Kheyre iyo maanta oo ay Dhalxa ceyriinka ku dubteen.
Xaqdarrooyin, gardarrooyin, iyo gefaf uu ka doodi karay intii uu xildhibaanka ahaa Ex. Xil Dhalxa ayuu ka aamusay kuwaas oo uu indha sharer ka xertay si muufada yar ee uu ka helayey reer Farmajo aanu isga ciideyn.
Maanta Waxaaa ku dhacday fallaar la sugayey inay ku dhici doonto isaga iyo kuwa badan oo la hal maala oo caawa shalleyto jooga, kuwa kalana waxaa sugaya seeftii Farmajo iyo Fahad goorta ay dafi doonto.
Ex- Xil. Dhalxa Waxaa uu madaxda u surtay oo uu isku sawiray nin dadka oo dhan magaciisa ay naceen muqaalkiisa ama sawirkiisa iska dhaafe, kaas oo ah Maxamed C. Farmajo sawirkiisa kuna sheegay astaantii qaran isagoo xildhibaanka u jiray waxyar inay ilmada ka qubato oo Meesha ku ooyo, jaceylka Farmajo dartiis.
Haddaba maadama uu ex-Xildhibaan Dhalxa yahay fanaan heesi jiray inkastoo hadda ay ka dhamaatay waxaan xusuunieynaa .
Heesta caanka ah ee Halkuu ila galay jaceylka ee uu qaaday Maxamed Mooge ahn.
Hoohey arrimahaad halleysay Habeen Nacasnimo ku dhaafay
Illeyn hibashiyo ma weydid Naftaadu inay is hiifto
…Hunguri Goortuu I qaaday Hubsiimo miyaan Ilaaway
Ex-Xil. Dhibaan Dhalxow dhageyso heesta oo dhameystiran kana wacyi geli dadka kaa dambeeya inay khalad tahay inaad muufo daba joogtid ee waa inaad mabda’ a iyo aragti fog aad dalkaan ka leedahay.
Previous articleFaahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxeysa qaraxii ka dhacay isgoyska Ceel-Gaabta
Next articleWeerar culus oo lagu qadaay garoon ku yaalla Sacuudiga
Xog Dheeraad ah oo laga Helay ujeedada Wareegtada Farmajo soo Saaray...